Guddiga isku dhafka ah ee DF & Maamullada oo soo saaray hab-raac LACAG laga samaynayo | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Guddiga isku dhafka ah ee DF & Maamullada oo soo saaray hab-raac LACAG laga samaynayo
Guddiga isku dhafka ah ee DF & Maamullada oo soo saaray hab-raac LACAG laga samaynayo
Waxaa lasoo saaray hab-raaca hannaanka madaxa bannaan ee xallinta khilaafaadka Doorashada 2020/2021, kaasoo u muuqda mid lacag laga samaynayo.
Tusaale, waxaa qodobbada ka mid ah in ”qofkii cabasho qaba uu bixinayo $3,000 oo doollar oo diiwaan gelin ah”, taasoo ah kelmad caan ku ah xafiisyada maamullada Somalia, iyadoo aan la fahmaynin sababta lacag intaa le’eg loogu baahan yahay in qof cabasho qaba la diiwaan geliyo.
Waxaa awal soo baxay lacago badan oo iyadana lagu sheegay diiwaan gelin oo laga doonayo madaxda doonaysa inay isu sharraxaan kuraasida kala duwan min Madaxwayne ilaa Xildhibaan. Lacagahaasi ma galaan khasnadda umadda, mana jirto cid is waydiisa halka ay ka baxaan.
Somalia oo ah dal faqri ah ayaa waxaa ku habsadey siyaasiyiin intii yarayd ee ay umaddu haysey ka fara bixinaya, wixii iyaga loogu dhiibana ceeriinka ku qaybsanaya, balse nasiib darro, waxay dadkaasi u jiraan taageerada shacabka qaybsan dartii.
1. Golaha Wadatashiga Qaranka waxay go’aamiyeen in Doorashada 2020/21 loo sameeyo hannaan madax-bannaan oo lagu xalliyo khilaafaadka ka dhasha doorashada, kaas oo ku saleysan dhaqanka Soomaaliyeed iyo mabaadii’da caalamiga ee Xuquuqda Aadamiga.
2. Golaha Wadatashiga Qaranka iyagoo ka duulaya Mabaadi’da caalamiga, ilaalinta sharafta hannaanka doorashada, dhowrista xuquuqda codbixiyeyaasha iyo musharaxiinta, waxaay lagama maarmaan u arkeen in la sameeyo habraac cabasho oo waxtar leh lana fulin karo, kaasoo lagu xukmin ama go’aamin karo cabashada codbixiyeyaasha iyo musharaxiinta si sharci iyo sinnaan leh.
1. Guddiga Xallinta Khilaafaadka waxaa la dhisayaa ka hor magacaabidda/diiwaangelinta murashaxiinta iyo hawsha soo xulidda ergooyinka, waana inay socotaa ilaa laga xaqiijiyo natiijada kama dambeysta ah ka dib marka la eego dhammaan cabashooyinka iyo diidmada doorashada.
2. Guddigu wuxuu ka koobnaan doonaa labaatan iyo kow xubnood (21), kuwaas oo 9 xubnood ay soo magacaabayso Dowladda Federaalka ah, halka 12 xubnood oo kale ay soo kala magacaabayaan Dowladaha Xubnaha ka ah DF min labo (2) xubnood.
3. Waxaa la ilaalinayaa Metelaadda haweenka ee guddiga xallinta khilaafaadka iyagoo (30%) xubnaha guddiga ay noqonayaan dumar.
1. Guddiga xaruntiisu waxay noqoneysaa magalada Muqdisho, wuxuuna xafiisyo ku yeelanayaa xarumaha ay doorashadu ka dhacayso, iyadoo tixgalin gaar ah loo sameynayo Somaliland.
2. Guddigu waxaa uu kulan kooda ugu horeeya iska dhex dooranayaan Guddoomiye iyo Guddomiye ku xigeen. Doorashada Guddoomiyaha iyo Guddoomiye ku xigeenka waxaa la dooranayaa cod hal dheeri ah (50%+1).
3. Guddoomiyaha Guddiga ayaa saddex (3) xubnood u magacaabaya in ay ka hawl-galaan mid kasta oo ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah DF, waxayna go’aanadooda ku gaarayaan cod hal dheeri ah.
6. Qofkasta oo cabasho u gudbiya Guddiga waa in uu bixiyaa lacagta diiwaangelin cabashada oo dhan $3,000 oo doollar (sadex kun oo dollar), waraaqda cadaynaysa in uu ku shubay xisaabta bangiga ee Guddiga dooroshooyinka heer Federal waana in uu kusoo lifaaqaa galka cabashadiisa.
5. Go’aanada Guddiga Xalinta Khilaafaadka waxaa dib u fiirin kara Madaxda Dowlada Federalka ah iyo madaxda Dowlaha Xubnaha ka ah, Go’aankaas ay Madaxdu gaarto ayaa noqonaya go’aanka kama denbeysta ah, dibna dacwadaas uma gali karaan Guddi ama hay’ad kale oo sharci ah.
Guddiga isku dhafka ah ee DF & Maamullada oo soo saaray hab-raac LACAG laga samaynayo was last modified: October 3rd, 2020 by Admin
Dhageyso:-Barnaamijka Arimaha Caalamka.
Akhriso Faafaahin Khasaaraha ka dhashay weerar xalay ka dhacay Kismaayo